Nahita ny very ! | NewsMada
Nahita ny very !
Fikambanana iray nanatontosa hetsika kolontsaina tetsy amin’ny Cercle Germano-Malagasy (CGM) tohatohabaton’Antaninarenina no sahy nilaza voalohany fa « nahita ny very » ry zareo. Rehefa tena nozohina tokoa, marina ny voalaza. Teo amin’ny tontolon’ny kolontsaina, hitan’ny Ako Miantefa tokoa ny very. Anisan’ireny ny fahaizan’ny Malagasy mitendry valiha izay nampianarina indray teny an-toerana.
Tao anatin’ny 100 taona mahery, variana « nitady ny very » ny Malagasy. Hatramin’izao anefa, tsy mbola nahita ihany. Ny tadiavin-tsy hita, ny eo an-tanana mbola very indray… Dia toy izany hatrany. Miha tsy manan-javatra (kolontsaina, tantara, fahalalana, fomba amam-panao, harena,…) ny Malagasy.
… Tsy tokony ho lany andro amin’ny fitadiavana ny very ny Malagasy. Fotoana famoahana ny efa hita izao. Tsy very izany fa efa ao anatin’ny Malagasy tsirairay ny tahotra an’Andriamanitra, fandalana ny hasin’ny aina, fifanampiana sy fifanotronana na ankasoavana na ankaratsiana, fitiavana ny tanindrazana, fanajana ny raiamandreny, sns. Raha ireo monja no sahin’ny Malagasy ny miteny sy maneho fa « efa hitanay ireo », ho lasa lavitra i Madagasikara.
Toa nandonto ny sain’ny Malagasy ihany ny filazana fa « Mitady ny very isika», satria zary nametraka lalatra ao an-tsain’ny tsirairay fa very sy tadiavina avokoa ny « zavatra » rehetra ananan’ny Malagasy sy an’i Madagasikara. Hararaotin’ny « sasany » hatramin’izao izany fahazotoan’ny Malagasy mitady ny very izany handraofana ankolaka na mivantana ny hareny rehetra.
Tsy lasa lavitra anie raha izany ny zavatry ny Malagasy fa ao anatin’ny tsirairay ihany e ! Farafahalaviny any amin-dry « zareo » naka azy, indrindra moa fa raha eto Madagasikara ihany izy ireo.